Indho Saracaadka Shuuciyada iyo Noocyada Jwxo-shiil – Rasaasa News
Indho Saracaadka Shuuciyada iyo Noocyada Jwxo-shiil
Jul 8, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Shaydaankii Halgankeena shanshadii ka jabshee, qabiil soo shiriyee isagoon u shafeecin shidheeyey ee wad shiilay, shaah in aan u shubnaa sharaf nooma ahee, sheega oo shirka keena, Maadeey maad ka shidaan isagaa shumiyee.
Waxaan wada ogsoonahay in markii JWXO-SHIIL wakhtigii la doortay ee hogaanka Jwxo dhamaaday, uu bilaabay googooysmo iyo shirweyne hadda lama qaban karo. Markii ay dhamaatay dhamaan wixii wakhti ahaa ee sharcigu ugu dari karay iyo maantana farbaan maydhi ayaa wuxuu bilaabay in uu filimaan jilo.
Filimaantaa waxaa ka mid ah dagaalkii COBOLE ee lagu laayey xabashi, Chinese iyo Soomaaliba lagu laayey. Danta dhabta ah ee JWXO-SHIIL ka lahaa weerarkan waxay aheyd in uu indhaha dadka ka jeediyo khilaafka iyo culeyska isaga saaraan ee ahaa in uu meesha iskaga tago, hadii kale ragga maamulka la wadaaga soo hor fadhiisto. Taas waxaad ku garan kartaan dagaal dambe oo la mid ah kama dhicin dhulka Soomaalida Ogaadeeniya.
Midda kale ma yeedhaan Maadey wuxuu cajaladdii laga duubay intiinii dhagaysatay ayaa garane ku yidhi “Hadduu Ina Cumar Cismaan shirkiisa gaarka ah wax baan caydhiyey ku yidhaahdo, shirweynihiina diiday ururku wuu kala jabi, shacabka ayaana lagu tartamidoonaa” sidaas waxaa yidhi maaday. Waxaa kale oo aan ognahay in JWXO-SHIIL dhalinyaro Eritrea ka timid oo reer Fiiqeed u badnaa ku haligay dhulka oomanaha ah ee dhooba weyn, ka dibna Tigreegu xasuuqay oo qaar badan oo ka mid kolkii la qabtay ee ay in badan xabsi ku jireen Qabridahare ay isku dayeen in ay baxsadaan. Haddana dagaalkaas wuxuu JWXO-SHIIL u bixiyey [MANDAD]dadkana waxaa loogu sheegay in uu ahaa, Guul aan horey loo arag.
Maanta oo JWXO-SHIIL arintii ku xuntahay oo xaalkiisu marahayo meeshii ina Cumar Jees ee dilkii Allaha Unaxariistee Xaaji CABDULAAHI, ka dib ayuu bilaabay in uu sameeyo filimaan Cusub oo ah in dagaal socdo iyo in uu halgan ku jiro. Runtu sidaas ma ‘aha ee waxaa socda dagaal sokeeye, waayo;
1. marka hore wuxuu jabiyey xeerkii iyo sharcigii halganka umadda oo aanay jirin wax isu keeni kara maanta.
2. Wuxuu aarsi iyo ugaadhsi ku bilaabay dadkii Qoyskooda dakanooyinka daaqsinta ee reer baadiyuhu kala dhexeysay.
3. Wuxuu dil qarsoon iyo gacantii madoobay ee xukuumaddii Siyaad Barre lagu yaqaanay ka dhexbilaabay Ciidanka dhexdiisa iyo xubnihii ururka.
4. Xubnihii la cadaadiyey waxay noqdeen wax naftooda la carara oo xabashida u gala ka dibna qori qaata si ay isaga difaacaan kooxda JWXO-SHIIL, shacabkii oo dadkoodii sabab la’aanta lagu laayey in ay u aaraan bilaabay oo qaar badan oo ka mid ah ay galeen Booliska Cusub, jabhadihii kale oo iyana dagaaalo toos ah dhexmareen iyaga iyo kooxda JWXO-SHIIL, hadana xabad isla gaadaya hadii ay arkaana dagaal mooyee aan walaalnimo iyo wada halgan laga sugaynin iyaga iyo maleeshida qoyska JWXO-SHIIL ee wali haysata qoryihii magaca umadda laga soo qaaday dalka Eritrea ee Allaha u naxariistee SHAHIID DR.MOHAMED SIRAAD DOOLAAL uu isbaray ururka iyo iyaga waa dalka Eritrea.
Hadaba, ninkii aan ogeynow waxaad sugtaa muddo bilo ah, hadii ayna isbuucyo noqonin goorta laba qabiilo oo Soomaalida Ogaadeeniya ah ay toos isugu dhicidoonaan. Illahey hanaga baajiyo dagaal sokeeye JWXO-SHIIL baa dhiiga dadka walaalaha ah iyo dhiiga MUJAAHIDIINTA CABEE. Hadii ay tahay N.hureyaashii JWXO ee uu sida tooska ah iyo sida dadbanba u dilay iyo hadii ay tahay Mujaahidiinta Muslimiinta ah ee gaalada dagaalka kula jirta ee wiilasheena kuwa ugu wanaagsan ah.
Waayo iyagaa ugu aqoon badan, akhlaaq badan, uguna Diin badan. Marka ninkii caqli leh maanta weli talaa la gudboon oo ah in uu JWXO-SHIIL iska fogeeyo. kii aan caqli laheyna halkaa haku sugo dhibaatada ka dibna dalalka dariska ah ha u qaxo.
Waxaan si gaar ah ugu sheegi lahaa kuwa iyaga oo qabiil ah aad moodo in ay lee yihiin Jwxo, waa yaabe ma waxay u soo qaan shaarteen oo ay ku daba socdaan Jwxo-shiil dhibaatooyinka uu gaystay, mise daacad ayey halganka u yihiin. Hadii ay halganka daaca u yihiin dadkooda dhinac ha ka raacaan, hadii ay doonayaan in ay Jwxo difaacaana ha ogaadaan waxaa bi,iyey halgankii Jwxo-shill isagana laguma daynayo meel kasta oo uu galo, waayo dunuub ayuu dalka iyo dadkaba ka galay.
Dadka wada dhashay ruuxii isku gubaya cidii hooy siisa iyada ayaa xumaha ku talo gashay.
Dab Munaafaq shiday MUMIN BAA ku gubta.
Dambiga Aad Ummada ka Gasho Goor ay Noqotaba Waa Lagaa gudi